လာဒျရှငျလိုသူမြား ခြိတျဆှဲသငျ့သော မောငျကောကျရ သူဌေးဖွဈကိနျးပုံ – Askstyle
လာဒျရှငျလိုသူမြား ခြိတျဆှဲသငျ့သော မောငျကောကျရ သူဌေးဖွဈကိနျးပုံ
စား​သောက်​ဆိုင်​​တွေ လက်​ဖက်​ရည်​ဆိုင်​​တွေမှာကြပြန်​​တော့အသီးအနှံပုံ​တွေ​ဖျော်​ရည်​ ပုံ​တွေ ချိတ်​ဆွဲထားတတ်​ပြန်​တယ်​.ဒါက​တော့စည်​ပင်​ဝ​ပြော​စေတဲ့ဓာတ်​ကိုယူထားခြင်းဖြစ်​လို့.
နာမည်​လဲလက်​ရှိကြီး​နေတယ်​နံပါတ်​တစ်​​နေရာယူထားသူ​​အောင်​မြင်​မှုသရဖူ​တွေလဲ​ဆောင်း​နေသူဆိုရင်​​တော့ထိုအနုပညာရှင်​ပုံချိတ်​လိုက်​တဲ့အခါမိတ်​​ဆွေအ​နေနဲ့ ကံ​ကောင်းမလာရင်​​တောင်​မှကံ​တော့မဆ်ိုးသွားနိုင်​ဘူး​လေ.သို့မဟုတ်​.​ပြောင်းပြန်​သာ​တွေးကြည့်​​ပေ​တော့ ..
အချို့ ကုမဏ္ဏီကြီး​တွေမှာ ​ရွှေတ်ိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ပန်းချီ​တွေကျိုက်​ထီးရိုးဆံ​တော်​ရှင်​ပန်းချီ​တွေ ပုဂံမြို့ရဲ့ရှုခင်း​စေတီပုထိုး​တွေ ပါတဲ့ပန်းချီ​တွေချိတ်​ဆွဲကြတာမြင်​ဖူးကြမှာပါ.
ထိုပန်းချီ များက​တော့ပင်ကို လူအများရဲ့စိတ်​ဝင်​စားခြင်း လျှို့ဝှက်​ခြင်း.နဲ့​အောင်​မြင်​ထွန်း​ပေါက်​ခြင်း​တွေနဲ့ပြီးပြည်​စုံ​နေလို့သာ အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်​တယ့်​..လက်​ရှိထို​နေရာ​တွေမှာမြန်​မညသာမကကမ္ဘာကပါစိတ်​ဝင်​စား​နေတုန်ူ​နေရာ​ဒေသ​တွေလဲဖြစ်​ပြန်​တယ်​..
ကဲဒီ​တော့ခုလိုပန်းချီချိတ်​ပြီးအလုပ်​မလုပ်​ပဲ ​နေမယ်​.ပိုက်​ဆံကရလာမှာလားလို့ လူ့ကန်​လန့်​တချို့ကဝင်​ပြီးဖိုက်​မယ်​.ဆိုတာသိ့တယ်​..မှန်​ပါတယ်​ အလုပ်​ကိုယ်​တိုင်​လုပ်​မှပိုက်​ဆံဆိုတာရလာမယ်​..သို့​ပေမယ့်​ကံတရားရဲ့အ​ထောက်​အပံ​ကောင်းနမိတ်​​ကောင်းဆိုတာ​တော့ရှိလာမှာမဟုတ်​တဲ့အတွက်​.မိတ်​​ဆွေယုံချင်​လဲယုံသ​ဘောပါပဲ..
ယခုပြသထား​သော​မောင်​​ကောက်​ရသူ​ဌေးဖြစ်​ကိန်းဓာတ်​ပန်းချီ ကို .ဆိုင်​​တွေအိမ်​ရဲ့ဧည့်​ခန်း​တွေမှာချိတ်​ဆွဲပြီး​ဆောင်​ထားမယ်​ဆိုရင်​​တော့.လုပ်​ငန်းမှာအတိုက်​အခံ​ပေါ်​နေတာ​တွေ လုပ်​သမျှ​ငွေမ​ပေါ်လို့.စိတ်​ညစ်​​နေတဲ့သူ​တွေ..အ​ကြွေးပတ်​လည်​ဝိုင်းပြီး.လတ်​တိတ်​​နေသူ​တွေ အတွက်​အထူးသင့်​​လျော်​ပါတယ်​..
စား​သောကျ​ဆိုငျ​​တှေ လကျ​ဖကျ​ရညျ​ဆိုငျ​​တှမှောကွပွနျ​​တော့အသီးအနှံပုံ​တှေ​ဖြျော​ရညျ​ ပုံ​တှေ ခြိတျ​ဆှဲထားတတျ​ပွနျ​တယျ​.ဒါက​တော့စညျ​ပငျ​ဝ​ပွော​စတေဲ့ဓာတျ​ကိုယူထားခွငျးဖွဈ​လို့.ဆိုငျ​မှာစား​သောကျ​သူ​တှေ​ပြျောရှငျ​ဖှယျ​​ကောငျးတဲ့အရာ​တှေ​ရောကျ​လာ​စဖေို့ရညျ​ရှယျ​တဲ့ဓာတျ​တမြိုးဖွဈ​ပွနျ​တယျ​..
နာမညျ​လဲလကျ​ရှိကွီး​နတေယျ​နံပါတျ​တဈ​​နရောယူထားသူ​​အောငျ​မွငျ​မှုသရဖူ​တှလေဲ​ဆောငျး​နသေူဆိုရငျ​​တော့ထိုအနုပညာရှငျ​ပုံခြိတျ​လိုကျ​တဲ့အခါမိတျ​​ဆှအေ​နနေဲ့ ကံ​ကောငျးမလာရငျ​​တောငျ​မှကံ​တော့မဆျိုးသှားနိုငျ​ဘူး​လေ.သို့မဟုတျ​.​ပွောငျးပွနျ​သာ​တှေးကွညျ့​​ပေ​တော့ ..
အခြို့ ကုမဏ်ဏီကွီး​တှမှော ​ရှတျေိဂုံဘုရားကွီးရဲ့ပနျးခြီ​တှကြေိုကျ​ထီးရိုးဆံ​တျော​ရှငျ​ပနျးခြီ​တှေ ပုဂံမွို့ရဲ့ရှုခငျး​စတေီပုထိုး​တှေ ပါတဲ့ပနျးခြီ​တှခြေိတျ​ဆှဲကွတာမွငျ​ဖူးကွမှာပါ.
ထိုပနျးခြီ မြားက​တော့ပငျကို လူအမြားရဲ့စိတျ​ဝငျ​စားခွငျး လြှို့ဝှကျ​ခွငျး.နဲ့​အောငျ​မွငျ​ထှနျး​ပေါကျ​ခွငျး​တှနေဲ့ပွီးပွညျ​စုံ​နလေို့သာ အသုံးပွုထားခွငျးဖွဈ​တယျ့​..လကျ​ရှိထို​နရော​တှမှောမွနျ​မညသာမကကမ်ဘာကပါစိတျ​ဝငျ​စား​နတေုနျူ​နရော​ဒသေ​တှလေဲဖွဈ​ပွနျ​တယျ​..
ကဲဒီ​တော့ခုလိုပနျးခြီခြိတျ​ပွီးအလုပျ​မလုပျ​ပဲ ​နမေယျ​.ပိုကျ​ဆံကရလာမှာလားလို့ လူ့ကနျ​လနျ့​တခြို့ကဝငျ​ပွီးဖိုကျ​မယျ​.ဆိုတာသိ့တယျ​..မှနျ​ပါတယျ
ယခုပွသထား​သော​မောငျ​​ကောကျ​ရသူ​ဌေးဖွဈ​ကိနျးဓာတျ​ပနျးခြီ ကို .ဆိုငျ​​တှအေိမျ​ရဲ့ဧညျ့​ခနျး​တှမှောခြိတျ​ဆှဲပွီး​ဆောငျ​ထားမယျ​ဆိုရငျ​​တော့.လုပျ​ငနျးမှာအတိုကျ​အခံ​ပျေါ​နတော​တှေ လုပျ​သမြှ​ငှမေ​ပျေါလို့.စိတျ​ညဈ​​နတေဲ့သူ​တှေ..အ​ကွှေးပတျ​လညျ​ဝိုငျးပွီး.လတျ​တိတျ​​နသေူ​တှေ အတှကျ​အထူးသငျ့​​လြျော​ပါတယျ​..